GAROWE, Puntland - Musharaxiinta Madaxwaynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah ay hadal-jeedin sameeyaan, iyagoo Xildhibaanada usoo bandhigi doono barnaamijkooda siyaasadeed iyo taariikhdooda.
Musharax waliba waxuu haystaa 15 daqiiqadood, oo kula hadli doono Gollaha Wakiiladda.
Amniga Garowe ayaa si wayn loo adkeeyay, waxaana la arkayaa ciidamo dheerad ah oo lagu soo daabulay guud ahaan wadooyinka soo gala xarunta Aqalka Wakiilada.
Guddiga doorashada ayaa shalay soo gaba-gabeeyay labo maalin oo diiwaangelin ah, iyadoo uu soo saarey liiska rasmiga ah ee Musharaxiinta u tartamaya xilalka Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa 8-da January 2019.
Waxaa shuruudaha buuxiyay 21-musharax Madaxweyne, oo uu ku jira Cabdiweli Gaas, oo shantii sano ee uu hayay talada ka lumiyay Puntland fursado qaali ah, islamarkaana dayacay amniga iyo 11 kale oo u diiwaan-gashan Madaxwayne ku xigeenka DPL.
Maalin berri ah ayaa la filayaa inay doorashadda ka qabsoonto magaalo madaxda Puntland ee Garowe, iyadoo aysan ka qeyb-gali doonin wafdi ka socda dowladda Federaalka ah ee Somalia, kadib markii Wasaaradda Amniga PL u diiday.
Madaxwaynihii hore ee Puntland, Cabdiraxmaan Faroole, saraakiil ciidan iyo Isimada ayaa ugu baaqay Xildhibaanada Gollaha Wakiilada inay ka fiirsadaan codkooda meesha ay dhigayaan, islamarkaana ay doortaan shaqsi ku haboon hogaaminta Puntland.
Garowe Online, kala soco si toos ah Khudbadaha Musharixiinta ay jeedinayaan.
Gaas oo dib isku soo sharxay xilli uu ku fashilmay shantii sano ee hore
Puntland 18.12.2018. 12:09
Musharaxiinta ayaa shaki geliyay madax-banaanida Guddiga xalinta Khilaafaadka Doorashada.
Liiska rasmiga ah ee Musharaxiinta Puntland oo la shaaciyey [DAAWO]
Puntland 06.01.2019. 23:20
Askar lagu haysto Xabsi Garowe iyo baaq loo diray Baarlamanka Puntland [DAAWO]
Puntland 06.01.2019. 18:04